Yaa Hortaagan In La Muddeeyo Mooshinka Jawaari?! – Goobjoog News
Sida uu qabo xeer-hoosaadka golaha shacabka, waxaa gebo-gabo maraya mudaddii ay aheyd in loo codeeyo mooshinka ka dhanka ah guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, waxaa intaas dheer iyada oo golihii shacabka howl-maalmeedkii gabay ayaaney jirin wax fadhi ah oo la qorsheynayo iyo saan-saan lagu muddeynayo codeynta mooshinka.
Xildhibaannada golaha shacabka sida Xildhibaan Axmed Macallin Fiqi oo la hadlay Goobjoog News waxaa ay dalbadeen in golaha fariisto sida ugu dhaqsaha badan, codka loo qaado guddoomiye Jawaari, si markaasi kadib shaqada aqalka caadi ugu soo noqoto.
Xubno ka tirsan guddoonka golaha shacabka oo la hadlay Goobjoog News ayaa sheegay in maanta aanu jirin wax kulan ah oo golaha shacabka ah isla markaana aan weli la go’aamin waqti ay fariissanayaan guddiga joogtada ah si arrinta mooshinka go’aan looga gaaro, iyaga oo ka gaabsaday sababta iyo cidda meer-meerineyso in aqalka shaqeeyo.
Xubno ka tirsan guddiga joogtada ah ee golaha shacabka oo la hadlay Goobjoog News waxaa ay guddoomiye ku-xigeenka 1aad ee golaha shacabka Cabdiwali Shiikh Ibraahim Muudey ku eedeeyeen in aanu daacad ka aheyn muddeynta mooshinka Jawaari, oo uu mar walbo dib dhigayo, iyaga oo intaasi raaciyay in go’aanka la sugayo uu yahay mid siyaasadeed oo xukuumadda oo ay lu lug-yeelan-doonto sida, qaabka iyo goorta la muddeynayo mooshinka guddoomiye Jawaari.
Ka hadlidda siyaasadeynta mooshinka, sida uu Goobjoog News u sheegay Xildhibaan Maxamed Cumar Dhalxa, Mooshinkan waxaa wado xildhibaannada xukuumadda Kheyre ugu jira golaha shacabka, kuwaas oo sida uu sheegay is-difaacyo isaga oo yiri “Xukuumadda Mooshin ma waddo, Ra’isul wasaare Mooshin saxiixay ma arag, wasiir aan Xildhibaan aheyn oo wax saxiixay ma jiro, waxa mooshinka wado waa Xildhibaanno wasiirro ah oo iska difaaca weerar lagu soo qaaday, xaq ayey u leeyihiin taas, Jawaarina waa geystay dhammaan wax walbo oo lagu eedeeyay”